Wasaaradda arrimaha gudaha oo codsatay in la meel-mariyo hindisaha hay?adda Qaxootiga qaranka – Radio Daljir
Wasaaradda arrimaha gudaha oo codsatay in la meel-mariyo hindisaha hay?adda Qaxootiga qaranka
Diseembar 9, 2013 3:27 b 0
Muqdisho, December 9, 2013 – Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa ka codsatay baarlamanka federaalka inay si deg deg ah u ansixiyaan hindise sharciyeedka hay?adda qaxootiga iyo baragkacayaasha Qaranka, taas oo muhiim ah.
?Qaxootiga jooga dalalka gobolka aad ayuu u batay, sidoo kale waxaa jira baragkacayaal badan oo jooga gudaha dalka una baahan wax u qabasho.? Ayuu yiri Mahdi Cali.
Wasiiru-dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Mahadi Maxamuud Cali ayaa ka codsaday baarlamanka in ay u fariistaan dooda hindise sharciyeedka hay?adda qaxootiga iyo baragkacayaasha.
Mahdi ayaa xusay in la gaaray wakhtigii wadanka dib loogu soo celin lahaa dadka qaxootiga ah ee gobolka jooga, gaar ahaan dalalka deriska ah ee Kenya, Uganda iyo Yeman.
?Waa muhiim in dalalka deriska ah laga kor qaado ?xilligan qaxootiga faraha badan ee Soomaalida ah.? Ayuu yiri Mahdi oo muhiim ku tilmaamay in la meel-mariyo dhismaha hay?adda qaxootiga iyo baragkacayaasha qaranka.
Wasiiradda ayaa baarlamanka Soomaaliya hor dhigtay hindise sharciyeedkan, baarlamanka ayaa galay akhrinta hindise sharciyeedka ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka ee Soomaaliya.